फेल भएँ भने के गर्ने? | किशोरकिशोरी
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अब्खाज अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओसेसियन किकोंगो किन्यारवान्डा किरून्डी किश कोरियन क्रोएसियन क्षोसा गा ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिभ डच डेनिश तामिल तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बाश्कीर बुल्गेरियन भियतनामिज मले मल्यालम मालागासी माल्टिज मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
सकारात्मक कुरा सोच्नुहोस्‌। राम्रो अङ्‌क ल्याउन सक्दिनँ भनेर अचाक्ली चिन्ता गर्नु राम्रो होइन। आफ्नो क्षमताबारे नकारात्मक कुरा मनमा आउँदा त्यसलाई हटाउनुहोस्‌ र आफूमा भएको सकारात्मक कुरामा ध्यान दिनुहोस्‌। उदाहरणको लागि, मानिसहरूले पावलको बोल्ने क्षमताबारे खिसी गर्दा * तिनले यस्तो जवाफ दिए, “म बोल्नमा त्यति सिपालु नहुँला तर ज्ञानमा त पक्कै छु।” (२ कोरिन्थी १०:१०; ११:६) तिनलाई आफ्नो कमजोरी थाह थियो। यति मात्र होइन, आफूमा के-कस्तो राम्रो कुरा छ, त्यो पनि थाह थियो। तपाईं नि? तपाईंको राम्रो पक्ष के हो? यो कुरा पत्ता लगाउन तपाईंलाई गाह्रो लाग्छ भने कुनै परिपक्व व्यक्‍तिलाई सोधे कसो होला? उहाँहरूले तपाईंमा कस्तो खुबी छ र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर बताउन सक्नुहुन्छ।
वजन उठाउने अभ्यासले मांसपेशी बलियो भएजस्तै पढ्‌ने बानी छ भने स्कुलमा उन्‍नति गर्न सकिन्छ
पढ्‌ने बानी बसाल्नुहोस्‌। राम्रो अङ्‌क ल्याउने कुनै छोटो बाटो छैन। ढिलो होस्‌ या चाँडो, तपाईंले पढ्‌नै पर्छ। हुन त मान्छेलाई ‘पढ, पढ’ भनेको त्यत्ति मन पर्दैन। तर पढ्‌दा आफ्नै फाइदा हुन्छ। अलिकति मेहनत गर्नुभयो भने पढ्‌न रमाइलो लाग्न थाल्नेछ। पढ्‌ने बानी बसाल्न समयतालिका बनाउनुपर्छ। बिर्सन नहुने कुरा, तपाईंले पढाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। बाइबलले “हाँस्ने एउटा समय” र “नाच्ने एउटा समय” छ भन्छ। (उपदेशक ३:१, ४; ११:९) त्यसैले अरू युवाहरूजस्तै तपाईं पनि रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ होला। तर उपदेशक ११:४ ले यसरी सचेत गराएको छ, “बतासको विचार गर्नेले कहिल्यै छर्दैन, औ बादलमा नजर राख्नेले कहिल्यै कटनी गर्दैन।” यसबाट के सिक्न सक्छौं? ‘पछि पढौंला, भोलि पढौंला’ नभन्‍नुहोस्‌। कामकुरा पछि सार्ने बानीले गर्दा महत्त्वपूर्ण काम कहिल्यै सिध्याउन सक्नुहुन्‍न। पढाइलाई प्राथमिकता दिनुहोस्‌, त्यसपछि रमाइलो गर्नुहोस्‌। यसो गर्नुभयो भने तपाईंले दुवै कामको लागि समय पाउनुहुनेछ।
^ अनु.3मानिसहरूले पावलको बोल्ने क्षमता भए तापनि खिसी गरेको हुन सक्छ।